XSL3 / 160 riigga ceelasha
XSL3 / 160 Riigga qodista ceelku waa nooca gurguurta oo buuxa hawo-hawo dusha sare ka ridaya ceelka biyaha. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qodista iyo munaasabadaha kale. Waxaa loo yaqaan qoriga yar ee birta loo isticmaalo qodista ceelasha. Kharash-ku-ool ah. Qoto dheerida qoditaanka ugu badan waa 300m, dhexroor gudbinta ugu badnaan waa 330mm, iyo awooda qaadista ugu badan ee nidaamka quudinta waxay gaari kartaa 160kN. Way fududahay in la shaqeeyo oo aad ugu habboon dhismaha.
XSL7 / 350 Riigga ceelasha
XSL7 / 350 Riigga qodista ceel-biyoodka waa nooca hawo-soorayaasha buuxa ee hawo-biyoodka sare ee qodista ceel-biyoodka oo leh xawaare qodis degdeg ah, qoto-dheerida qoditaanka ugu badnaan 700m, dhexroor qodista ugu badan ee 500mm, iyo awoodda qaadista ugu badan ee nidaamka quudinta 350kN.
XSL7 / 360 Riigga qodista ceel-biyoodka waa rooleel buuxa hawo-sare sare kaxaynta ceelka biyaha. Qoto dheerida qodista waxay gaari kartaa 700m, dhexroor gudbinta ugu badan waa 500mm, iyo awooda qaadista ugu badan ee nidaamka quudinta waa 360kN. Aad ayey ugu kalsoon yihiin macaamiisha. Qiyaasta iibku waa mid aad u sarreeya waxqabadka kharashkuna aad ayuu u wanaagsan yahay.
XZ1000A Riigga qodista jihada jihada jihada leh wuxuu leeyahay dhexroor ugu badnaan 1200mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 1075kN, Xuddunta 45000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 23t.
XZ3600 jihada qodista jihada jihada ayaa leh dhexroor ugu badnaan 1600mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 3600kN, Xuddunta 120,000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 48t.
XZ6600 qoditaanka jihada jihada jihada jihada leh wuxuu leeyahay dhexroor ugu badnaan 2000mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 6600kN, Xuddunta 210,000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 70t.
XZ450Plus jihada qoditaanka jihada jihada jihada leh wuxuu leeyahay dhexroor ugu badnaan 1000mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 960kN, Xuddunta 23500N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 20t.
XZ680A Riigga qodista jihada jihada jihada leh wuxuu leeyahay dhexroor dib u habeyn ugu badnaan ah 1000mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 725kN, Xuddunta 31000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 21t.
YG -13 riigga mini-qodista
YG-13 mashiinka qodista yar ee wareega ayaa lagu rakibay Xugong XE55DA ama Shanhe Intelligent SWE60E excavator mainframe. Adoo hagaajinaya xagasha shaqada iyo shucaaca shaqada, jajabyo ku habboon ayaa la xushaa, dhexroorka ugu badan ee qodista qodista wuxuu noqon karaa 1000 mm.
YG-13 mashiinka qodista yar ee wareega ah ayaa ah doorashada ugu horeysa ee lagu qodayo meel cidhiidhi ah. Si sahal ah ayuu u soo gali karaa qashin-qubka weyn ma soo geli karo goobta howlaha qodista, sida qolka wiishka, dhismaha gudaha, dhagxaanta hoose, nadiifinta hoose ee goobta. Qaabkan waxaa si weyn loogu isticmaalay dhismaha aasaaska uumiga korantada ee subgrade cidhiidhi ah ee dawlada hoose, jid weynaha iyo korantada korantada.
XSL5 / 280 Riigga qodista ceelka
XSL5 / 280 Riigga ceel-qodidda waa ceel-biyood buuxa oo hawo-qaadis ah oo qodidda ceel-biyoodka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sahaminta dhulka hoostiisa, qodista iyo dhismaha kale. Qoto dheerida qoditaanka ugu badan waa 500m, dhexroor gudbinta ugu badan waa 400mm, iyo awooda qaadista ugu badan ee nidaamka quudinta waxay gaari kartaa 280kN. Way fududahay in la shaqeeyo, bey'adda u fiican iyo tamar-badbaadin.
mashiinka qodista ceelka, HDd rig, mashiinka qodista hdd, Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal,